IRI JI SCOTLAND:IHE ỌBỤLA DỊ MMA, ONYE IGBO NA-EME IJI KPATA IHE Ọ NA-ERI BỤ ỤZỌ O SI AKỌ JI-IGWE AGỤBỤZỤ – hoo!haa!!
IRI JI SCOTLAND:IHE ỌBỤLA DỊ MMA, ONYE IGBO NA-EME IJI KPATA IHE Ọ NA-ERI BỤ ỤZỌ O SI AKỌ JI-IGWE AGỤBỤZỤ
Edinbo: Igwe Lọrịns Agụbụzụ, Onyeisi oche ndị eze ọdịnala n’Enugwu Steeti ma bụrụkwa Eze Ọgbụnechendo nke Mbụ n’Ezema Olo nke dị n’Okpuru Ọchịchị Ezeagụ, n’Enugwu Steetiekwuola na “ihe ọbụla dị mma onye Igbo ọbụla na-eme iji kpata ihe ọ na-eri bụ ụzọ o si akọ ji”.
Eze ọdịnala a, onye bụkwa Eze Ọgbụnechendo nke Mbụ n’Ezema Olo dị n’Okpuru Ọchịchị Ezeagụ, n’Enugwu Steeti kwuru nkea n’oge ọ bụ onye ọbịa pụrụ iche na mmemme Iri Ji Ndigbo Scotland nke afọ a nke otu Igbo Amaka, Scotland chịkọbara n’ụlọ ezumezu Kirk parish, Edimbo na mba Scotland.
“Site taa, ka anyị riwezie ji ma rite ndụ. N’afọ ọzọ, ka ji anyị mekwaa ọfụma. Ma ndị ji ọrụ ha akọ ji, ma ndị ji ego ha akọ ji, la Chukwu gọzie ha nile. Ihe ọbụla onye Igbo ọbụla na-eme iji kpata ihe ọ na-eri bụ ụzọ o si akọ ji”
Onye eze a rụrụ ọrụ ọtụtụ afọ dịka onye nnọchiteanya Naịjiriya na mba dị iche iche kelekwara maka mbọ ha na-agba ịkwalite omenala Ndigbo na mba ofesi.
Onyeisi otu Igbo Amaka, Scotland bụ Mazị Ifeanyi Louis Okoro bụ nyere Igwe Agụbụzụ ụkpa ekele pụrụ iche maka nnukwu ịhụnanya o nwere maka omenala nakwa asụsụ Igbo mere o jiri hapụ ihe nile o nwere ime na Naịjiriya were bịa nọnyeere ha.
Ọ kọwara na ebumnobi Igbo Amaka, Scotland bụ ịhụ na ụmụ ha echefughi omenala nakwa asụsụ Igbo
N’okwu nke ya, Dọkịnta Juud Eze, Onyeisi oche, Ọgbakọ Ndigbo UK & Northern Ireland kelekwara ndị otu Igbo Amaka, Scotland ma sikwa ha “jide ka ha ji” na mbọ ha na-agba maka ọdịmma ndị Igbo bi na Scotland tinyekwara iweta mmepe n’Ala-Igbo.
Ndị ọbịa pụrụ iche ndị ọzọ bịara mmemme ahụ gụnyere Omenka Uche Ukandu, Omenka Arthur Okongwu, Onyeisi oche, IPOB Scotland, Omenka Emeka Ọfọ, Onyenwe Ụlọ ọrụ, Home care company Ltd tinyekwara ndị ọzọ.
Otu ihe pụtara ìhè bụ na ọtụtụ ndị mba Scotland biakwara ya bụ mmemme were mụtakwuo maka omenala Ndigbo.
Previous Post: ODOGWU BỊAFRA:GỊNỊ BỤ ESEMOKWU NNAMDI N’ASARI?
Next Post: ENUGWU:NWA NGWỤRỌ KWERE MMADỤ N’AKA, IHE NWOKE YA KPỌNWỤỌ